Spotify inoda kutanga kubhadhara zvishoma kune maartist | Ndinobva mac
Apple yagara ichizvirumbidza pamusoro peiyo mari yainopa kubhadhara maartist emimhanzi inopihwa neyekutenderera kwavo mimhanzi mapuratifomu. Apple yagara ichiedza kuhwina kufarira kwemakambani rekodhi neicho chirevo uye tinogona kutaura kuti muchidimbu yaita zvakanaka kwazvo zvichienderana nenhamba yevanyoreri yazvino, mamirioni gumi nemashanu. Asi zviri kumubatsirawo kuti asvitse zvibvumirano nemakambani ekurekodha uye maartist ekupa maalbham matsva pamberi peumwe munhu. Yekupedzisira yeiyo yaFrank Ocean. Kupa imwe mari kune maartist uye marekodhi ekunyora mimhanzi yavo inobvumidza iyo kambani kuve iri munzvimbo yekutaurirana zvakasarudzika zvaburitswa, zvaburitswa izvo zvinozotorera Cupertino-based kambani mari yakanaka.
Rekodha makambani anoda kuve mune zvese zvinogoneka kutenderera mumhanzi midhiya kuitira kuti zvigadzirwa zvavo zvibatsire. Parizvino Apple iri kubhadhara makambani rekodhi 58% yemubhadharo wekurekodha makambani, nepo Spotify iri kubhadhara 55%, asi inotarisira kukwanisa kudzikisa iyo muzana kusvika ku50%. Dambudziko Spotify rakatarisana naro nderekuti makuru mavara: Sony, Universal Music uye Warner Music vanoda Spotify kuti ienzane nemari iri kubhadharwa Apple parizvino nebasa remimhanzi.
Iri idambudziko reSpotify kubvira kunyangwe ichida kupinda muhondo yezvakasarudzika, sekuburitsa kwatakaita mazuva mashoma apfuura, haina mukana wekugona kukumbira kana chinangwa chayo chikuru chiri chekudzikisa mari yainobhadhara kunyorera makambani. Zviripachena kuti Apple ine itsvo dzakakwana kuti ikunde hondo iyi, hondo inogona kungokuvadza vashandisi sezvo kana imwe yemakambani akarekodha akafunga kurega kupa kabhuku yavo mufemu yeSweden, chimwe chinhu chisinga fanike, vashandisi vepuratifomu iyi avo vaizotambura nekukuvara kwechibvumirano chehondo pakati pevaviri vari kutenderera mimhanzi hofori yepanorama iripo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Spotify inoda kutanga kubhadhara maartist mashoma
Wolfe anoshandura iyo MacBook kuita yepamusorosoro-kutamba mutambo rig